Ọ bụghị mmejọ ha, ọ bụ nke gị | Martech Zone
Ahụrụ m onwe m ọzọ n’etiti akwụkwọ ịghagharị ọzọ, anọ n’ime efere m ugbu a.
Achọtara m Obere bụ New Big, nke Seth Godin dere, na ngwụcha izu a. Enwere m anụrịrị ya ọ bụ ezie na Maazị Godin jidere m na mberede. A sị na m gụrụ ntakịrị ihe banyere akwụkwọ ahụ, m ga-achọpụta na ihe a bụ mkpokọta ọrụ ya… Echere m na ọ dị ọtụtụ dị ka ige ntị 'Onye Kasị Ukwuu', ọ dị mma ịnụ egwu niile… mana na-eche ihe kpatara na ị 't dị na-ege ndị niile cd's ị nwere na shelf.
Na ngwụsị nke ụbọchị ahụ, echefuru m ọtụtụ ihe m gụrụ ma ọ bụ nụ n’aka Maazị Godin. Ọ bụ ihe anyị niile na-ata ahụhụ ya. Akwụkwọ ole ka ị na-echeta? Luckily, I buy hardcovers because I often pick up old books and na-agagharị na ha site na mmụọ nsọ na echiche. Nke a bụ otu n'ime akwụkwọ ndị ahụ. Oburu na m bulie akwukwo a ma guo ebe m na-aga ikwu, o gha ato okpukpu abuo ihe m kwuru.
Maazị Godin bụ onye edemede nwere ọgụgụ isi mara mma - na - etinyekarị ọnọdụ ndị dị mgbagwoju anya ka ọ bụrụ okwu dị mfe ị ga - eme. Ọ bụghị ọtụtụ ndị edemede ndị ọzọ na-akpali mmụọ ya. Ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọtụtụ ndị edemede ndị ọzọ nwere ihe ndị a Mr. Godin na-eme. Ọgụgụ ya anaghị agwa gị ihe ị na-eme dị njọ ma ọ bụ na ọ dị mma, nanị ọ na-ajụ ajụjụ ma kwuo ihe ndị na-eme ka ị chee ọnọdụ gị ihu.
Na peeji nke 15, Seth na-ekwu, sị:
Ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị egeghị ntị, ọ bụghị ha kpatara ya, ọ bụ nke gị.
Nke ahụ nwere ike ọ gaghị ada ka nnukwu Chaị, ma ọ bụ n'ezie. Nkwupụta a nwere ike gbanwee n'ọtụtụ ogige dị iche iche:
Ọ bụrụ na ndị ahịa gị enweghị ike iji sọftụwia ahụ, ọ bụghị ha kpatara ya, ọ bụ nke gị.
Ọ bụrụ na atụmanya gị azụghị ngwaahịa a, ọ bụghị ha kpatara ya, ọ bụ nke gị.
Ọ bụrụ na ha abịaghị na webụsaịtị gị, ọ bụghị ha kpatara ya, ọ bụ nke gị.
Ọ bụrụ na ndị ọrụ gị anaghị ege ntị, ọ bụghị ha kpatara ya, ọ bụ nke gị.
Ọ bụrụ na onye isi gị anaghị ege ntị, ọ bụghị ha kpatara ya, ọ bụ nke gị.
Ọ bụrụ na ngwa gị adịghị arụ ọrụ, ọ bụghị ha kpatara ya, ọ bụ nke gị.
Ọ bụrụ na di gị ma ọ bụ nwunye gị anaghị ege gị ntị, ọ bụghị ha ka o si n’aka, ọ bụ gị nwe ha.
Ọ bụrụ na ụmụ gị anaghị ege ntị, ọ bụghị ha kpatara ya, ọ bụ nke gị.
Ọ bụrụ na obi adịghị gị ụtọ, ọ bụghị ha kpatara ya, ọ bụ nke gị.
Echere m na isi ihe bụ, gịnị bụ ị aga-eme banyere ya? Seth gara n'ihu:
Ọ bụrụ na otu akụkọ anaghị arụ ọrụ, gbanwee ihe ị na-eme, ọ bụghị oke mkpu ị na-eti (ma ọ bụ na-ebe ákwá).
Gbanwee ihe ị na-eme. I nwere ike igbanwe. Mgbanwe apụtaghị na ị ga-eme ya naanị, n'agbanyeghị. Rịọ maka enyemaka ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya.